IMF oo amaahinaysa Masar $ 4.8bn - BBC Somali - Ganacsi
IMF oo amaahinaysa Masar $ 4.8bn
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 25 Novermber, 2012, 23:40 GMT 02:40 SGA
Wafdi ka socda hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa dowladda Masar kala xaajoonaya dayn gaareysa $4.8bn oo dollar.
Madaxa IMF Christine Lagarde iyo Madaxweyne Maxamed Morsi
Wafdi ka socda hay'adda lacagta adduun ee IMF ayaa dowladda Masar kala xaajoonaya dayn gaareysa $4.8bn oo dollar.
Waxaa wadaxaajoodkaasi diiradda lagu saari doonaa oo kale lacagta ay dowladdu ku kabto shidaalka, oo dowladda ay kaga baxdo lacag ka badan 170bn LE ee lacagta Masar. IMF ayaa ka doonaysa Masar inay joojiso lacagta ay ku kabayso shidaalka, laakiin hadii shidaalka uu qaaliyoobo waxaa wadanka ka dhalan kara rabshado siyaasad. BBC Katy Watson ayaa ka waramaysa.